tokana chrome fandroana milentika fandroana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW Faucet ambony fandroana Chrome ambony
Miaraka amin'ireo tsipika manintona ary ahitàna fivoriam-pandrindrana vita amin'ny famandrihana vita amin'ny famafazana azy, ity lavaka fandroana tokana ity dia manampy betsaka amin'ny sehatra rehetra.
Aza asiana endri-javatra: volafotsy volafotsy 2321501C amin'ny faran'ny kromo toa tara-pahazavana, famolavolana zava-poana izay tena kanto, ary izahay mametaka ny kodiarana triple-pétrage izay miavaka, amboary ny lavaka fandroana.
Torolàlana fametrahana 2321501C
Solika fandroana efitra fandroana 2321501C
Mitady makiazy plastika mitovitovy vita amin'ny varahina matevina? Aza mitady lavitra intsony! WOWOW dia nanamboatra efitra fandroana tokana natao ho an'ny efitra fandroana tokana, izay hanome tombony amin'ny modely amin'ny efitra fandroana. Ny mpamorona ny WOWOW dia mitady fomba vaovao foana hahafahana mifandray manokana amin'ny faucets an'ny efitrano fandroana azy. Ity fehin-kiraro fandroana manokana amin'ny fandroana iray ity dia manisy endrika famolavolana vita amin'ny làlana tokana. Tsy ho hitanao any an-kafa io famolavolana io ary azo antoka fa hividy poketra fandroana iray izay karazana iray ianao. Ity endrika famolavolana trandrahana vita amin'ny halavam-paty any Etazonia ity dia manova ny fandatsahan'ny rano fandroana tsy tapaka amin'ny fandroana lavaka fandroana. Tsy misy fisalasalana!
Rehefa mamerina mandrafitra na mamorona ny efitra fandroana vaovaonao ianao, dia mety maniry ny hifantoka manokana amin'ny faucets moorinao. Matetika ny faucets fandroana dia voafantina amin'ny faran'ny tetikasa rehefa saika mahatratra ny fetran'ny tetibola (na mihoatra aza). Amin'ity tranga ity dia tokony hohalavirinao fa voageja noho ny safidy ratsy ny fandroana fandroana anao. WOWOW dia manaporofo matetika fa ny fandroana avo lenta dia azo atao amin'ny vidiny mora. Ary mbola miaraka amina famolavolana mahafinaritra izay manampy zaridaina tsara tarehy, classy ary / na ankehitriny amin'ny famoahana trano fandroana. Amin'ny WOWOW dia resy lahatra isika fa manolotra ny vidiny tsara indrindra ho an'ny vola azonao.
Ny fofom-baravarankely mandeha amin'ny efitra fandroana miaraka amin'ny sandany tsara indrindra
Ny kalitaon'ny kojakoam-baravarankely iray an'ny WOWOW dia tsy azo iadian-kevitra. Ny akora vy matevina dia manome faharetana lava amin'ny fampisehoana farany. Ho tsikaritrareo izany rehefa mitazona tanana fandroana an'habakabaka WOWOW eny an-tananao ianao. Ity koa ny lira iray hafa raha oharina amin'ny faucets fandroana mora mety hitanao eny an-tsena. Ny WOWOW etsy andaniny dia tsy nanetsika ny fitaovana mihitsy, mety hampandefitra ny kalitaon'ny faucets ao amin'ny efitrano fandroana azy. Ary na izany aza, mbola mora vidy ny efitrano fandroana WWOW. Izahay dia afaka milaza fa tsy hahita vola tsara kokoa noho ny vola ianao. Vokatr'izany dia manolotra anao antoka tokana vola 90 andro izahay. Raha mahita boaty fandroana mitovy amin'ny vidiny ambany ianao, na boaty plastika tsara tarehy tsara amin'ny vidiny mitovy, homenay vola izahay. Tsy misy fanontaniana apetraka.
Ny avotra spout ambony dia manana aoter manamboatra rano. Ity Neoperl Aerator ity fampiasa ity dia manome rano mikoriana sy malefaka hahazoana fampiononana tsara. Tsy mila manahy momba ny fitrandrahana rano ianao. Tombontsoa fanampiny ny ahafahanao mitahiry hatramin'ny 50 isan-jaton'ny rano miaraka amin'ity endri-javatra mahomby amin'ny efitra fandroana rano ao amin'ny efitrano fandroana WOWOW ity. Azonao atao ny manaisotra mora an'io aoteranao io, mampiasa ny fitaovana (tafiditra). Amin'ity fomba ity dia afaka manadio matetika ny aoter ianao ianao, manala ny sisan-javatra sarotra, ahafahanao manome traikefa tsara indrindra ho an'ny mpampiasa.
Efitrano fandroana voaravaka fandroana avo lenta
Ny singa ao amin'ny efitrano fandroana plastika tokana dia nosedraina imbetsaka mba hanolotra anao ny tsara indrindra. Ny valva seramika ohatra ohatra dia nosedraina in-500,000 mahery. Ary na izany aza, taorian'ireo fitsapana rehetra ireo, dia niasa tamim-pilaminana sy tsy nitete ary tsy afa-maina ny valva. Ny tokantrano tokana dia mety mampiasa ny kamory ao amin'ny efitra fandroana latsaky ny 10,000 isan-taona. Midika izany fa afaka mampiasa ity rano fandroana plastika solo ity mandritra ny taona maro ianao, nefa tsy mahafoy ny asany tsara indrindra.
Amin'ny WOWOW izahay dia matoky ny kalitao sy ny fampandehanana ny efitra fandroana navoakan'ny trano fandroana tokana. Vokatr'izany dia tsy matahotra izahay ny hanome anao ny vanim-potoanan'i garabe 3 taona. Raha tsy tanterahina tsara mandritra ny 3 taona ireto ny fofom-baravarankely vita amin'ny rano ao anaty efitrano fandroana, dia hosoloinay ny fofom-baravarankely iray ho an'ny efitra fandroana vaovao. Amin'izany fomba izany, ianao azo antoka fa ny fitohizan'ny fampisehoana mitohy ny fandroana fandroana mandro. Raisintsika ho zava-dehibe ny andraikitsika ary handray an-tanana izany tsy misy fisalasalana tokana. Tsy amin'inona na amin'inona dia manana vondrona haingana mpividy mpanjifa mahatoky avy amin'ny vazantany isika.
Sangan'asan'ny efitra fandroana azo ampiasaina amin'ny efitrano fandroana finday
Ny fikorianan'ny rano sy ny mari-pana dia mora fehezina amin'ny tànana tokana amin'ity vongan-trano fandroana ity. Azonao atao ny mandamina ny mari-pana amin'ny rano amin'ny tanana tokana, raha toa ka manana ny tananao iray hafa ianao, ohatra, rehefa manosotra ny nifinao. Ho hitanao ny faharetan'ny fandefasana avy hatrany rehefa ampiasainao ity valinkazo avo kalitao ity. Ho fahafinaretana isaky ny miasa ity hawana ity.
Ny chôma fandroana tokana vita amin'ny chrome WOWOW dia miaraka amin'ny haingon-trano fampiakarana misy azy. Ity seho mihetsika ity dia mamorona firaisana iray miaraka amin'ny fantsom-bolan'ny efitra fandroana iray, mba hisy fiantraikany lehibe kokoa ao amin'ny lakozia ao an-dakozia. Ity tohanan-drano fanondrahana an-tsokosoko ity dia mety ho mora tohina miaraka amina gazety tokana. Mila a
kely fanerena hiasa. Noho ny fanamboarana azo ampiharina dia afaka manondraka rano miala amin'ny fandroana fandroana haingana sy mangina.
Fametrahana kitapo fitoeran-jiro famandrihana solon-tanana
Noho ny fampiasana fitaovana varahina matevina dia afaka manome antoka rano famatsiana tsy misy rano ny WOWOW. Amin'izany fomba izany, dia afaka manolotra traikefa azo antoka amin'ny fianakavianao ianao ary tsy mila manahy momba ny kalitaon'ny rano ianao. Farafaharatsiny tsy noho ny faucite fandroana anao. Ary noho ny fihenany dia afaka miantoka an'io fampisehoana io mandritra ny taona maro mandritra ny taona maro ny fahatapahan'ny rano ao amin'ny efitrano fandroana WOWOW.
Ny endri-javatra mahafinaritra an'ny efitra fandroana an-trano fandroana WOWOW dia ny hahafahanao mametraka izany amin'ny tenanao tsy manakarama hazo. Ity fantsom-baravarankely iray amin'ny efitra fandroana ity dia natao tamin'ny endrika hafa amin'ny faucet fandroana hafa ary azo apetraka ao anatin'ny 30 minitra fotsiny. Na dia tsy matihanina aza ianao. Ny fehin-tsolika vita amin'ny rano ao amin'ny efitrano fandroana an'ny WOWOW dia mitondra kitapo feno feno izay manome antoka faingana fametahana: takelaka vita amin'ny 4-inch (mifanentana amin'ny fandroana fandroana vita amin'ny rano 1 - sy 3-hole), kojakoja miakatra amin'ny chrome, a Hosefo Tucai miloko 20 santimetatra manana kalitao azo antoka, mametraka fonon-tanana, fitaovana manala aotra, ary maro hafa. Amin'izany fomba izany, dia mora ny mametraka ny tenanao amin'ny fametrahanao fandroana tokana ao amin'ny efitrano fandroana WOWOW.
Ny tombony azo avy amin'ny efitrano fandroana voatanisa ao anaty rano fohy.
 Sarobidy indrindra amin'ny vola
 Ny fampandehanan-javatra mikoriana ny rano
 Famolavolana tokana sy kanto
 Fitaovana fampitaovana avo lenta
 Ampidiro kitapo fanaovan-tena
 Fanaterana 3 taona
SKU: 2321501C Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: farano vita, lavanila vita, Fitondrana tokana